Dhageyso Faragelinta Ethiopia ee Arrimaha Somalia. Getachew Reda “Ma waxaad filaysaa in dadkeena dhiigooda daadinaya naftoodana huraaya inaanayn door ku lahayn wax kastoo ka dhacaya Somalia taasi ma dhacayso” – idalenews.com
Dhageyso Faragelinta Ethiopia ee Arrimaha Somalia. Getachew Reda “Ma waxaad filaysaa in dadkeena dhiigooda daadinaya naftoodana huraaya inaanayn door ku lahayn wax kastoo ka dhacaya Somalia taasi ma dhacayso”
Haaruun Macruuf oo ka tirsan shaqaalaha VOA oo wareystey Afhayeenka Ra’iisul wasaaraha dalka Ethiopia Getachew Reda ayuu Getachew sheegey mowqifka dowladiisa iyo IGAD ee ku aadan arinta Jubbaland. Wuxuuna afhayeenku ku jawaabay in xukumada Ethiopia ay taageersan tahay hanaan lagu xaqiijiya in soomaalidu aanay dib ugu noqonin qaskii iyo colaadii soo rogaadiyay 22dii sano ee la soo dhaafay.
Afhayeenku wuxuu sheegay in dowlada Somalia ay doonayso inay dib u dhigto sameynta maamulka Jubbaland inta laga dhameystiray dastuurka iyo inay qeyb ka ahaata qorshaha xasilinta IGAD. Afhayeenku wuxuu hoosta ka xariiqay in Ethiopia ay taageersantahay qorshaha xasilinta IGAD oo lagu heshiiyay sanadkii 2011 kaas oo siinaya IGAD fududayn iyo door ilaalineed.
‘‘Ma qabo in Dowlada Federaalka ee Somalia ay iska idnha tirayso xaqiiqada ah inuu jiray hanaan horay uga jiray Kismaayo waxkasta oo ka dhaca Kismaayana ay tahay in laga fikiro uuna jiro door weyn oo ay dowlada federaalku leedahay.Ilama aha in Dowlada Somalia moogtahay howsha iyo hanaanka Kismaayo,’’ ayuu yidhi afhayeenku.
Mar la weydiiyay afhayeenka Ra’iisul wasaaraha Ethiopia in hadii IGAD doorkeeda Jubbaland ay si tartiib tarbiib ah faraha ugala baxayso ayuu afhayeenku ku jawaabay sidan
‘‘Dhiigeena ayaanu ku bixinaynaa, nafteena ayaanu uhuraynaa anaga waxaa naga jooga badhtamaha iyo Koonfurta Somalia ciidamo Itoobiyaan ah sidoo kale waxaa jira ciidamo Kenyaan ah oo si xoog leh ula dagaalamaya Alshabaab.Waxaa naga jooga ciidamo AMISOM ah oo ka dagaalamaya dalkaasi iyagoo taageeraya shacabka Somalia,marka ma waxaad filaysaa in dadkan dhiigooda daadinaya naftoodana huraya inaanayn door ku lahayn wax kastoo ka dhacaya Somalia iyo si kasta oo ay u dhacayaan, waxaan kuu xaqiijinayaa inaanay taasi dhici doonin”
Website Dayniile oo been abuur joogto ah ku haayo masuuliyiinta safaarada Turkiga iyo Safiirka Somalia ee Turkiga. Waa Maxayse Ujeedka?
Daawo: KTN oo ah Televisionka laga Leeyahay dalka Kenya oo gaarey Kismaay warbixintaana isku soo dubaridey